Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
Isan'andro Hira Video Sary Vavaka Rindrim-bavaka Teny
31 okt - 06 nov
07 - 13 novambra
14 - 20 novambra
21 - 27 novambra
Alakamisy 17 novambra 2016
Fiantsoana izao rehetra izao hisaotra an’ Andriamanitra noho ny nataony ho an’ ny mpanompony
1 Ho an’ ny mpiventy hira. Tonon-kira. Salamo. Mihobia ho an’ Andriamanitra, ry tany rehetra;
2 Mankalazà ny voninahitry ny anarany; omeo voninahitra Izy ho fiderana Azy.
3 Lazao amin’ Andriamanitra hoe: endrey, mahatahotra ny asanao! ny fahalehibiazan’ ny herinao no hikoizan’ ny fahavalonao Anao.
4 Ny tany rehetra hiankohoka eo anatrehanao ka hankalaza Anao; eny, hankalaza ny anaranao izy.
5 Avia, ka jereo ny asan’ Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin’ ny zanak’ olombelona.
6 Efa nampody ny ranomasina ho tany maina Izy; nandeha an-tongotra nita ny ony ny olona; tao no nifaliantsika tamin’ [Na: Ao no aoka hifaliantsika amin’] Andriamanitra.
7 Manjaka mandrakizay amin’ ny heriny Izy, ary ny masony mandinika ny firenen-tsamy hafa; aoka tsy hanandra-tena ny maditra.
8 Misaora an’ Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy,
9 Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo.
10 Fa efa nizaha toetra anay Hianao, Andriamanitra ô; efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ ny memy.
11 Efa nampiditra anay tamin’ ny fandrika Hianao; efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Hianao.
12 Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ ny fitahiana mahatretrika Hianao.
13 Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra odorana aho; hefaiko aminao ny voadiko,
14 Izay notononin’ ny molotro sy naloaky ny vavako, fony aho azom-pahoriana.
15 Hateriko aminao ho fanatitra odorana ny matavy mbamin’ ny setroky ny ondrilahy; hanatitra omby sy osilahy aho.
16 Avia, mihainoa hianareo rehetra izay matahotra an’ Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho an’ ny fanahiko.
17 Izy no nantsoin’ ny vavako; ary ny fanandratana Azy no teo ambanin’ ny lelako.
18 Raha nankasitraka [Heb: nijery] ota tao am-poko aho, dia tsy mba hihaino ny Tompo;
19 Kanefa efa nihaino tokoa Andriamanitra; efa nihaino ny feon’ ny fivavako Izy.
20 Isorana anie Andriamanitra, izay tsy nandà ny fivavako, na nanaisotra ny famindrampony tamiko.
Apokalypsy 15 : 1 - 8
Ny amin’ ny lovia fito nisy ny loza fito, izay nentin’ ny anjely fito ka naidiny tamin’ ny tany
1 Ary hitako fa, indro, nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe mahagaga, dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, Satria ireny no enti-mahatanteraka ny fahatezeran’ Andriamanitra.
2 Ary nahita aho fa, indro, toa ranomasina fitaratra miharo afo, ary izay naharesy ka afaka tamin’ ny bibi-dia sy ny sariny ary ny isan’ ny anarany dia nitsangana teo amoron’ [Na: tao amin] ny ranomasina fitaratra, nitana lokangan’ Andriamanitra.
3 Ary mihira ny fihiran’ i Mosesy, mpanompon’ Andriamanitra, sy ny fihiran’ ny Zanak’ ondry izy manao hoe: Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha; Mahitsy sy marina ny làlanao, Ry Mpanjaka mandrakizay.
4 Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo ô? Fa Hianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao; Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao.
5 Ary rehefa afaka izany, dia nahita aho fa, indro, novohana ny tempoly, dia [Na: tao amin’] ny tabernakelin’ ny vavolombelona [Dia ny Didy Folo] tany an-danitra;
6 ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin’ ny tempoly, ary niravaka vato soa madio sy mamirapiratra [Na: (niakanjo rongony fotsy sady madio no mangatsakatsaka)] izy sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin’ ny tratrany.
7 Ary ny anankiray tamin’ ny zava-manan-aina efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito, feno ny fahatezeran’ Andriamanitra, Izay velona mandrakizay mandrakizay.
8 Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin’ ny voninahitr’ Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin’ ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin’ ny anjely fito.